भारतलाई उसकै धर्तिमा धुल चटाउन तेस्रो टेस्टको लागि इङ्ल्याण्डले गर्‍यो टिमको घोषणा ! ब्यापक परिवर्तन |
भारतलाई उसकै धर्तिमा धुल चटाउन तेस्रो टेस्टको लागि इङ्ल्याण्डले गर्‍यो टिमको घोषणा ! ब्यापक परिवर्तन
२०७७, ८ फाल्गुन शनिबार १४:१६ February 20, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं : भारत विरुद्धको तेश्रो टेस्टका लागी इङ्ल्यान्डले सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको छ । इङ्ल्यान्डले भारतसँगको तेश्रो टेस्टका लागि १७ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो ।
२४ फेब्रुअरीमा अहमदाबादमा हुने तेश्रो टेस्टका लागि इङ्ल्यान्डको टिममा जो रुट कप्तान, जेम्स एन्डरसन, जोरा आर्चर, जोनी बेयरस्टो, डम बेस, स्टुअर्ड ब्रोड, रोरी बन्र्स, ज्याक क्रोले, बेन फोक्स, ड्यान लोरेन्स, ज्याक लीच, ओली पोप, डम सिब्ले, बेन स्टोक्स, ओली स्टोन, क्रिस वोक्स र मार्क वुड रहेका छन् ।
चार टेस्ट म्याचको सीरीजमा दुई म्याच खेलिसकेका दुवै टिम १–१ को बराबरी मा छन् । चेन्नईमा भएको पहिला दुई टेस्टमा इङ्ग्ल्याण्डले भारतलाई २२७ रनले हराएको थियो भने दोश्रो टेस्टमा भारतले इङ्ल्यान्डलाई ३१७ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको छ । फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयता अनुसार नेपाल १७१ औं स्थानमा यथावत रहेको हो । गत महिना पनि नेपाल १७१ औं स्थानमै रहेको थियो ।
कोरोनो महामारीपछि नेपालले गत नोभेम्बरमा बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो ।जसमा नेपालले एक खेलमा पराजय भोगेको थियो भने एक खेलमा बराबरी खेलेको थियो । त्यस यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन । नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
नेपाल भन्दा अघि भारत र माल्दिभ्स रहेका छन । भारत १ सय ४ औं स्थानमा रहेको छ । माल्दिभ्स १ सय ५५ औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल भन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान रहेका छन् । भुटान १८९ औं, बंगलादेश १८६ औं, श्रीलंका २ सय ६ औं र पाकिस्तान २०० औं स्थानमा रहेका छन् ।
नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ भने फ्रान्स दोस्रो, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा इंग्ल्यान्ड र पाँचौ स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन् । स्पेन छैटौं, अर्जेन्टिना सातौं, उरुग्वे आठौं, मेक्सिको नवौं र इटाली दशौं स्थानमा रहेका छन् ।